The White Haired Witch of Lunar Kingdom (2014) | MM Movie Store
တရုတျသိုငျးကား ကွညျ့ခပြမေဲ့ အပိုငျးအမြားကွီးမကွညျ့ခငျြတဲ့ သူတှအေတှကျ ဒီဇာတျလမျးလေးကို ညှနျးပေးခငျြတယျ။ ၂၀၁၄ တုနျးက ရိုကျခဲ့တာပါ။
နာမညျကြျောတရုတျမငျးသမီးခြော Fan Bingbing နဲ့အတူ (သိမျးငှကျသူရဲကောငျးဇာတျလမျးထဲက ရနျကျောအဖွဈ လူသိမြားတဲ့) မငျးသားခြော Huang Xiaoming တို့အဓိကခေါငျးဆောငျပါဝငျထားတာကွောငျ့ သရုပျဆောငျပိုငျးကိုတော့ အထူးညှနျးစရာမလိုပါဘူး။
ဖွောငျ့မတျမှနျကနျပွီး ကွငျနာတတျတဲ့၊ သစ်စာတရားကိုတနျဖိုးထားတဲ့၊ ကိုယျကြိုးစှနျ့တတျတဲ့ ဝူတနျးဂိုဏျးသား ကြိုးရိဟနျတဈယောကျ…. ဝူတနျးရဲ့သိက်ခာတရား၊ ဆရာသခငျအတှကျ ကလဲ့စားနဲ့ တိုငျးပွညျအရေးတို့ကွား ရှေးခယျြစရာကွုံလာတဲ့အခါ ဘယျလိုရငျဆိုငျဖွရှေငျးမလဲ။
နနျးတှငျးက မိစ်ဆာမလို့သတျမှတျပွီး လိုကျလံဖမျးဆီးခံနရေပမေဲ့ တကယျတမျး အမြားပွညျသူကို ကူညီပေးနတေဲ့၊ အခဈြကိုမယုံကွညျတတျတဲ့ မိနျးမခြောလေးနဲ့ မတ်ေတာတရားကွီးမားတဲ့ ကြိုးရိဟနျတို့ရဲ့ အခဈြလမျးခရီးက ဖွောငျ့ဖွူး နိုငျပါ့မလား။
သိုငျးဇာတျလမျးတငျမကဘဲ တိုငျးပွညျအရေး၊ သစ်စာဖောကျမှုတှနေဲ့အတူ အခဈြ၊ အလှမျးရသစုံကို ထညျ့သှငျးရိုကျကူးထားပါတယျ။ ဇာတျလမျးရိုကျကူးစဉျကလညျး မငျးသားဟာ ရိုကျကှငျးမှာ ၃ မီတာအမွငျ့ကနေ ပွုတျကခြဲ့တာကွောငျ့ ထိခိုကျဒဏျရာရခဲ့တဲ့အထိ စှနျ့စားရိုကျကူးခဲ့ကွတာပါ။
ဘယျလိုပဲဖွဈဖွဈ တရုတျသိုငျးကားခဈြသူတှအေတှကျရော ရုပျရှငျခဈြသူတှအေတှကျပါ ကွညျ့လို့ကောငျးမယျ့ ဇာတျလမျးတဈပုဒျဆိုတာ သခြောပါတယျ။
တရုတ်သိုင်းကား ကြည့်ချပေမဲ့ အပိုင်းအများကြီးမကြည့်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို ညွှန်းပေးချင်တယ်။ ၂၀၁၄ တုန်းက ရိုက်ခဲ့တာပါ။
နာမည်ကျော်တရုတ်မင်းသမီးချော Fan Bingbing နဲ့အတူ (သိမ်းငှက်သူရဲကောင်းဇာတ်လမ်းထဲက ရန်ကော်အဖြစ် လူသိများတဲ့) မင်းသားချော Huang Xiaoming တို့အဓိကခေါင်းဆောင်ပါဝင်ထားတာကြောင့် သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကိုတော့ အထူးညွှန်းစရာမလိုပါဘူး။
ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ပြီး ကြင်နာတတ်တဲ့၊ သစ္စာတရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်တတ်တဲ့ ဝူတန်းဂိုဏ်းသား ကျိုးရိဟန်တစ်ယောက်…. ဝူတန်းရဲ့သိက္ခာတရား၊ ဆရာသခင်အတွက် ကလဲ့စားနဲ့ တိုင်းပြည်အရေးတို့ကြား ရွေးချယ်စရာကြုံလာတဲ့အခါ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမလဲ။
နန်းတွင်းက မိစ္ဆာမလို့သတ်မှတ်ပြီး လိုက်လံဖမ်းဆီးခံနေရပေမဲ့ တကယ်တမ်း အများပြည်သူကို ကူညီပေးနေတဲ့၊ အချစ်ကိုမယုံကြည်တတ်တဲ့ မိန်းမချောလေးနဲ့ မေတ္တာတရားကြီးမားတဲ့ ကျိုးရိဟန်တို့ရဲ့ အချစ်လမ်းခရီးက ဖြောင့်ဖြူး နိုင်ပါ့မလား။
သိုင်းဇာတ်လမ်းတင်မကဘဲ တိုင်းပြည်အရေး၊ သစ္စာဖောက်မှုတွေနဲ့အတူ အချစ်၊ အလွမ်းရသစုံကို ထည့်သွင်းရိုက်ကူးထားပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းရိုက်ကူးစဉ်ကလည်း မင်းသားဟာ ရိုက်ကွင်းမှာ ၃ မီတာအမြင့်ကနေ ပြုတ်ကျခဲ့တာကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အထိ စွန့်စားရိုက်ကူးခဲ့ကြတာပါ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် တရုတ်သိုင်းကားချစ်သူတွေအတွက်ရော ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေအတွက်ပါ ကြည့်လို့ကောင်းမယ့် ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။
Fulham vs Liverpool (LIVE)